Markii uu Rasuulka (scw) soo gaaray gurigii Zeyd Binu Xaaritha Ilaah ha ka raalli noqdee, waxaa xaggiisa ku soo carartay gabadhii yareyd ee uu dhalay Zeyd, iyadoo markaas-na si xad-dhaaf ah u oonaysa. Xabiibka Rasuulka (scw) ayeey arrintaas saamaysay, dabadeedna wuxuu billaabay inuu isna ooyo. Sacad Binu Mucaad oo la socday Rasuulka (scw) ayaa ku yiri “maxay tahay tanina Rasuulkii Alloow”, wuxuuna Rasuulka (scw) ugu jawaabay “waa oohinta xabiibka uu u ooyo xabiibka uu jecel yahay”. Ilaahay ha ka raalli noqdo Zeyd Binu Xaaritha iyo dhammaan intii u soo hurtay fidinta diinta islaamka, aamiin.
Daabacaad: September 5, 2003